Ödeshög | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Östergötlands län / Ödeshög
Degmada Ödeshög waa degmo aad u qurux badan rabta ineey kordhiso tirada dadka degan degmada. Marka laga reebo bartamaha degmada oo iyadana la dhaho Ödeshög waxaa kaloo jira tuulooyinka Trehörna iyo Hästholmen. Wadada weyn ee E4 oo ag marta waxeey fududeyneysaa in saacad wax ka yar lagu tago magaalooyinka waaweyn oo eey degmadu dariska latahay ee Linköping iyo Jönköping.
Jönköping 65 kiilomitir
Linköping 67 kiilomitir
Göteborg 214 kiilomitir
Stockholm 262 kiilomitir
Inta badan dadka degmada waxeey deganyihiin guyo eey ayaga leeyihiin. Shirkadda guryaha ee degmada ee Ödeshögsbotäder waxeey maamushaa guryo gaaraya 279. Badankood waxeey ku yaallaan bartamaha degmada, inta kalana waxeey ku yaallaan Hästholmen. Degmada waxeey kaloo leedahay guryo baraafat ahaan loo kireysto.
Luqadaha looga hadlo Degmada Ödeshög waxeey kala yihiin carabi, soomaali, tigree, daari, filibiin, boolish, laatish, leetlaandees, af-ruush, iyo af-roomaaniyaan.
Jaaliyadaha ka dhisan degmada waxaad ka raadin kartaa, liiska jaaliyadaha ee degmada.
Waxkasta weey isku dhowyihiin degamda. Bartamaha degmada waxaa ku yaal dukaanka ICA oo leh meel aad boostada ah. Waxaa kaloo kale oo kuyaal xafiiska degmada o ka kooban maktabad, xafiiska shaqada oo furan hal maalin isbuucii. Waxaa kaloo ku yaal dukaamada kabaha iyo kuwa gada dharka iyo alaabta caruurta ku cayaarto.
Degmada waxeey leedahay dugsiyada xanaanada carruurta oo isugu jira kuwo eey dowladdu leedahay iyo hal gaar looleeyahay oo iskool karishtaan ah. Caruurta markeey dhameeyaan ama subixii inteysan billaabin dugsiyada xanaanada waxaa loo diyaariyey xarumo lagu maaweeliyo.
Dugsiga degmada Ödeshög waa dugsi usaaxiib ah qaab wanaagsanaan iyo nidaam ku dhisan is qiimeyn iyo is qadarin. Dugsiyada ugu waaweyna waxeey kala yihiin Fridtjuv Bergskolan oo leh fasallada 1-5. Lysingskolan oo leh fasallada 6-9. Qeybta diyaarinta maadoonyinka leeska rabo si loo galo dugsiga sare waxeey ku taal degmada laakin barnaamijyada kale waxaa loo aadaa degmooyinka dariska ah.
Degmada Ödeshög waxeey leedahay studie- och yrkesvägledare qof ku takhasusay inuu dadka ka caawiyo barnaamijyada kala duwan uu qofka rabo inuu barto. Waxaa degmada ka jira jaanisyo waxbarasho oo badan. Jaamacada ugu dhow waxeey ku taal Linköping iyo machad ku yaal Jönköping.
La taliyayaasha waxbarashada iyo xirfada
Jaamicada sare ee Linköping
Degmada Ödeshög waxeey leedahay rug caafimaad oo leh xarunta daryeelka carruurta. Isla dhismaha rugta caafimaadka waxaa ku yaal farmashiiye iyo rugta caafimaadka ilkaha. Xanuunnada degdega ah waxaa lagu daaweeyaa qeeybta emerjensiga ee isbitaalka Motala.
Waxaad xaq u leedahay turjubaan markaad la xiriireysid xafiisyada dowladda.
Hadaadan heeysan baabuur waxaad raaci kartaa gaadiidka guud ee degmada. Tareen isteeshinka ugu dhow waxuu ku yaal Mjölby. Shirkadaha baska iyo tareenka waxaa lakala dhahaa Östgötatrafiken iyo SJ.
Meealaha shaqo ee ugu waaweyn degmada waa shirkadaha beeraha iyo dhirta, warshadaha wax soosaarka iyo shaqooyinka caafimaadka. Shaqo bixiyayaasha ugu weyn waxeey ku yaallaan Mjölby iyo Väderstad waxeeyna kala yihiin (Toyota Industries Europe AB) iyo (Väderstad-Verken AB).
Shaqooyinka ka banaan gudaha Ödeshög